Budata Bridge Rider APK maka Android
Budata Bridge Rider
Free Budata maka Android (61.00 MB)
Budata Bridge Rider,
Bridge Rider bụ egwuregwu ewu ewu na-echetara Crossy Road nwere ahịrị anya ya. Nime egwuregwu anyị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ Android anyị (egwuregwu dị mma na ekwentị ma mbadamba), anyị na-eji ike anyị na-enyere ndị ọkwọ ụgbọ ala aka ịga nihu nokporo ụzọ.
Ebumnuche anyị na egwuregwu ahụ, nke m chere na ndị hụrụ egwuregwu retro ga-atọ ụtọ igwu egwu, bụ ịmepụta àkwà mmiri ka onye ọkwọ ụgbọ ala nwee ike ịga nihu nemeghị ka ọ daa mbà, ma ọ dịghị anyị mkpa ime mgbalị pụrụ iche iji mepụta àkwà mmiri. Naanị ihe anyị na-eme bụ ikpokọta iberibe ihe ndị mejupụtara akwa mmiri na mmetụ anyị na-eme noge kwesịrị ekwesị. Mgbe anyị jisiri ike gafere àkwà mmiri anyị mepụtara na oge dị ukwuu, anyị na-enweta akara anyị. Nezie, ka okporo ụzọ ahụ na-aga nihu, ọ na-esiwanye ike ịmepụta àkwà mmiri ka nhazi nke okporo ụzọ na-agbanwe.
Anyị nwere ike imeghe ndị ọkwọ ụgbọala na ụgbọ ala ọhụrụ site na isi ihe anyị na-enweta site nịrụ àkwà mmiri. Enwere ndị ọkwọ ụgbọ ala na ụgbọ ala 30 na-adọrọ mmasị ịhọrọ nime egwuregwu ahụ.
Bridge Rider Ụdịdị
Nha faịlụ: 61.00 MB
Mmepụta: ATP Creative